Qur’aan Ha Ku Dhegysan Baska, Iyo Qisadii Ka Danbeysay.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Published: December 28, 2016, 3:43 pm
(0) Comments Dalka Ingiriiska magaalada London nin rakaab ah ayaa laga dejiyay Baskii uu la socday kadib markii uu moobilkiisa ku dhegystay Qur’aanka kariimka ah.
Wadaha baska ayaa mar keliya ku dhawaaqay ka deg baska?. Ninka rakaabka ah iyo wadaha waxa dhex maray dood adag. gabadh ka mid ahayd rakaabka ayaa sheegtay in waduhu khaldan yahay waayo? ninkani wuxuu ku dhegaysanayay qur’aanka moobilkiisa cod hoose.
Waxa kale oo ay cadaysay in waduhu ka codsaday inuu bakhtiiyo Qur’aanka, iyadoo ka dib-na ninku uu sidaasi sameeyay, laakiin hadda-na uu mar keliya is bedelay Derawalku oo ku yidhi mayee naga deg haddii aad dhegaysanayso Qur’aan.
Laakiin ninka raakabka ah ayaa ku yidhi “Sidee ayaan uga degayaa waxaan bixiyay nooli, waxaanad iga dalbatay in aan bakhtiiyo, waanan sameyay?.
Wadaha baska ayaa ku yidhi “booliiska ayaan u yeedhayaa” laakiin ninka ayaa u sheegay inuu u yeedho isagoo u raaciyay inuu yahay cunsuri.
Boolisku markii ay yimaadeen ayay wadaha u sheegeen inuu iska wato socodkiisa.
Xafiiska gaadiidka gudaha London ayaa sheegay inay baadhayaan arrinkan iyagoo kaashanaya hay’adda Metroline.
« Warbixinta Ka HoreysayUurku Waxa Uu Isbeddel Ku Keenaa Hannaanka Shaqo Ee Maskaxda Hooyada Iyo Awooddeed La Dhaqanka Bulshada..	Warbixinta Xigto »Wax Ka Barro Cunitaanka Kalluunka Iyo Wanaaggiisa Caafimaadka Ee Jidhka Aadamaha..	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Leave a Reply Cancel reply